Fiahiana ara-tsosialy : “Vahaolana ny lalàna”, hoy ny sekoly katolika | NewsMada
Fiahiana ara-tsosialy : “Vahaolana ny lalàna”, hoy ny sekoly katolika
Maro ny olana sedrain’ny sekoly katolika eto amintsika, indrindra ny any ambanivohitra. Ao anatin’izany ny fifandonana amin’ny mpanara-maso ny asa, ny raharaha sasany miakatra any amin’ny fitsarana, sns. “Hany vahaolana ny lalàna, ka nahatonga ny fampiofanana ny mpitantana sekoly”, hoy ny mompera Ranaivoson Jules, talen’ny foiben’ny fampianarana sekoly katolika (Didec). Nanomboka ny taona 2015, nahatratra 13 ny diosezy niofana amin’ireo 21 manerana ny Nosy, toy ny diosezin’Ambositra, nanomboka ny talata ary nifarana omaly.
Ho an’ny mompera Antoine Marie Claret avy ao Ambositra, “zava-dehibe ny fanomezana fiahina ara-tsosialy, ka mba tsy miala maina rehefa tonga ny fahanterana”. Nilaza ny mpampiofana, Louis Didier, fa “tsy rariny intsony rahatrizay antitra ny mpiasa ka miato amin’ny asany any aoriana ka ilaina ny fandraisana ny fisotroan-dronono”.
Ho an’ireo ray aman-drenin’ny mpianatra sahirana ny ankamaroany, fantatra fa azo atao ny manolo ny karaman’ny mpampianatra amin’ny alalan’ny zavatra, toy ny trano fonenana, sakafo, sns. Tsy ekena koa ny tsy fandoavana ny latsakemboky ny Cnaps, satria misy ny fepetra mifehy azy. Nohamafisin’ireo mpiofana tany Ambositra koa ny tokony hamoahan’ny fanjakana haingana ny lalàna vaovao mifehy ny fiahiana ara-tsosialy.
Nanokatra ny fotoana tany Ambositra ny tale jeneraly (DG) ny Cnaps, Arizaka Rabekoto Raoul.